Raha ampitahaina amin'ny fomba famoahana mangatsiaka nentim-paharazana toy ny rano ranomandry, rano mangatsiaka, alikaola sns, dia misy ireto teboka miavaka manaraka ireto:
1. Fahazoana aina: Azo ampiasaina amin'ny toerana maro tsy mila fepetra manokana izy io. Izy io dia azo ampifandraisina amin'ny faritra samihafa amin'ny vatan'olombelona nefa tsy misy fiatraikany amin'ny fihetsiky ny vatan'olombelona. Mora ny mifikitra sy mitrana, tsy misy loto, tsy misy residu, ary mora entina.
2. Fampiononana: Ny sosona gel dia misy rano mihoatra ny 90%, izay manakaiky ny rano ao anatin'ny selan'ny olombelona. Malemilemy sy ahazoana tohina ny gel.
3. Vokatry ny faharetana maharitra: Ny fihenan'ny rano sy ny akora ao amin'ny sosona gel dia miadana sy mitohy, ary ny fotoana fiasana aorian'ny fampiharana dia mety maharitra 8 ora.
4. Fahasosorana ambany: Malemy fanahy sy tsy mahasosotra ny hoditra ny famatrarana mangatsiaka ary tsy hiteraka fiatraikany ratsy toy ny hatsiaka.
Amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny rano ao anaty gel polymer sy ireo singa fampangatsiahana voajanahary dia azo esorina ny hafanana ary azo tanterahina ny fampangatsiahana eo an-toerana. Ny singa fanafody dia ampiarahina amin'ny hydrogel. Amin'ny alàlan'ny asan'ny rano, ireo singa fanafody dia afaka miditra ao anaty sosona matavy. Izy io dia miditra ao amin'ny sela misy sela, tonga any amin'ny toerana misy ny lesona ary miasa amin'ny faritra voakasik'izany mba hahatratrarana ny vokatry ny famatrarana mangatsiaka hanamaivanana ny fanaintainana, ny fitrohana percutanie ary ny fitantanana maharitra.
Ny famatrarana mangatsiaka dia afaka manery ny capillaries eo an-toerana, mampihena ny fitohanana eo an-toerana, mampihena ny fahatsapana ny fiafaran'ny nerveza ary manamaivana ny fanaintainana, mampihena ny mari-pana sy ny tazo, mampihena ny fikorianan'ny rà eo an-toerana, ary manakana ny fihanaky ny fivontosana sy ny fivelomana. Izy io dia afaka manafoana ny fitarihana hafanana ao amin'ny vatana, mampitombo ny fiparitahan'ny hafanana ary mampihena ny hafanan'ny vatana. Ny mangatsiaka mangatsiaka dia mety ho an'ny olona mila compresse mangatsiaka ho an'ny eo an-toerana voalohany toy ny fahasimban'ny tavy Ajian, mararin'ny tazo mahery ary marary hafanana, areti-nify ary olon-kafa.
Firafitra sy fampisehoana lehibe: Ahitana lamba tsy tenona, sosona hydrogel ary sarimihetsika mangarahara. Anisan'izany ny akora fanampiana toy ny mint, bearol, ary tsiro azo ampiana amin'ny hydrogel.
Sakany amin'ny fampiharana: mety amin'ny fanaintainana ateraky ny spondylosis vozon-tranonjaza, soroka mivaingana, hyperplasia taolana, herniation ny lumbar disc, fanaintainan'ny lamosina sy tongotra, mangana, aretin'ny vanin-taolana, sns., Ary afaka manala havizanana
Ny vokatra lehibe dia misy: patch antipyretic, patch ice, patch patch, patch of cold compress.